Miverina isan-taona ny olana: miaina ao anaty rano indray ny faritra iva | NewsMada
Miverina isan-taona ny olana: miaina ao anaty rano indray ny faritra iva
Miverina isaky ny fotoam-pahavaratra ny olan’ny farira iva raha vao mirotsaka ny orana. Nanomboka ny asabotsy lasa teo ary nitohy hatramin’ny alatsinainy hariva sy ny alina ny orana eto an-dRenivohitra. Arahina tafiotra sy avandra izany ho an’ny faritra sasany ka rava indray ny voly legioma sy anana saika hamidy amin’ny tsenan’ny fetin’ny Noely sy ny faran’ny taona ho an’ny mpamboly maro.
Eny amin’ny tanàna ambany toerana: i Besarety, Anatihazo Isotry, Andranomanalina, Antetezana Avofoany, i Tsaramasay sy Antohomadinika… miditra any an-trano ny rano satria tsentsina avokoa ny lakandrano fivarinan’ny ranon’orana izay mfangaro amin’ny rano maloton’ny tokantrano. Nisy mialoha ny fanadiovana lakandrano nataon’ny fokontany sy ny kaominina, saingy tsy maharaka raha vao betsaka ny ranon’orana.
Tsy amin’ny faritra iva ihany fa mandrevo koa ny fotaka amin’ny lalana rehetra aorian’ny firotsahan’ny orana, miaraka amin’ny fako entin’ny riaka satria tsy voaraokan’ny mpiasan’ny Samva. Sary miverina isan-taona izany, saingy tsy mbola misy vahaolana maharitra hatramin’izao.
Ny fiovan’ny toe-tsaina sy ny fanadiovana isan-tanàna no tokony himasoana mialoha ny fiavian’ny rotsak’orana. “Tokony hatsahatra koa ny fanotofana tanimbary fivarinan’ny rano”, hoy ny maro.